‘नुन भुटुन जुटाउन चौंरी पाल्छु’ |
‘नुन भुटुन जुटाउन चौंरी पाल्छु’
प्रकाशित मिति :2017-08-25 14:24:02
-महिला खबर स‌‍‌‍ंवाद-
दोलखा कालिञ्चोक गाउँपालिका वडा नम्बर ६ लापिलाङकी पार्वती थामी ५० वर्षको हुनुभयो । उहाँ दोलखाको सफल चौरी व्यवसायी हुनुहुन्छ । १२ वर्षदेखि हिमाली क्षेत्रमा चौंरीपालन व्यवसायमा रमाई रहनु भएको पार्वती यो व्यवसायबाट परिवारको गुजारा चलेको बताउनुहुन्छ । सरकारले चौंरीको लागि चरनको व्यवस्था र चांैरीबाट उत्पादित वस्तु बिक्रिको लागि बजार व्यवस्थापन गरिदिने हो भन अझ राम्रो आम्दानी गर्न सकिने बताउने पार्वतीसँग दोलखाबाट महिला खबर सहकर्मी सर्मिला बुढाथोकीले गर्नुभएको कुराकानीको संक्षेप ः–
– चौरी पालन व्यवसाय गर्न कतिको सजिलो छ ?
मैले व्यसायिक रुपमा चौरी पाल्न लागेको १२ वर्ष भयो । चौंरी पाल्न सोचे जस्तो सजिलो त छैन तर यसलाई आफैले सजिलो मानेर गर्नु पर्छ । चौंरी गोठ समय समयमा सारिरहनु पर्छ । वन भरी डुलेर चांैरी खोज्नु पर्छ । बाँधेर पाल्न सकिदैन । लड्यो कि ? म¥यो कि ? भनेर खोज्न हिँड्नु पर्छ । चरण क्षेत्रको पनि समस्या नै छ ।
– तपाईंले अरु व्यवसाय नरोजेर चांैरी पालन नै किन रोज्नुभयो ?
हाम्रो लेकको ठाउँ हो । धेरै चिसो र हिँउ पर्ने भएकाले खान पुग्ने गरी अन्न फल्दैन । चौरी नपाले त हाम्रो नुन भुटुन खाने बाटो नै हँुदैन । आन्दानी भएन भने कसरी बाँच्ने ? विरामी हुँदा के ले उपचार गर्ने ? आफ्नो खाँचो टार्नको लागि पनि चौरी व्यवसाय भन्दा अरु विकल्प नै भएन ।
– चौरी पालनबाट वार्षिक आम्दानी कति हुन्छ ?
अहिले मसँग २१ ओटा चांैरी छन् । चौरीको दुधबाट घ्यु, चिज, छुर्पी बनाएर बेच्छु । यि सबैको उत्पादन खर्च कटाएर गरेर वर्षको १ लाख रुपैयाँ जति कमाई हुन्छ ।
– उत्पादन भएका सामानको उचित मुल्य पाउनुभएको छ त ?
चौरीबाट उत्पादन भएका दुग्धजन्य पर्दाथहरुले परिश्रम अनुसारको मुल्य पाउन सकेको छैन । बजारमा धाएर बच्दा बढि खर्चिलो हुन्छ । हामीले ठेकेदारलाई बेच्ने हो । ठेकेदारले बजार भाउ अनुसारको मूल्य दिँदैनन् । सस्तोमा दिनु पर्छ नत्र सामान कटाउनै गाह्रो पर्छ ।
– चांैरी पालन व्यवसायबाट अघिक लाभ पाउन के गर्नुपर्ला त ?
हामीले चौंरी व्यवसाय सुरु गरेको लामो समय भयो । तर, अहिलेसम्म सरकारी तथा गैर सरकारी कुनै पनि निकायले सहयोग गरेको छैन । त्यसैले चौंरीबाट उत्पादन भएका दुग्धजन्य पर्दाथ बित्रीm वितरणको लागि बजारको सहज व्यवस्था, चरनको सहज व्यवस्था र चौंरी खरीद गर्न सरकारले अनुदानको व्यवस्था गरिदिए अझ धेरै चौंरी पालन गरी उत्पादन बढाएर थप आम्दानी गर्न सकिने थियो ।